vendredi, 01 janvier 2021 13:51
Frantsa : Olona 1000 manao fety atsokosoko
Noho ny valanaretina Covid-19 dia voarara ny mivoaka alina manomboka amin'ny 8ora alina ka hatramin'ny 06 maraina, voarara ihany koa ny fitangoronana fanaovana fety ankoatran'ny fianakaviana vitsivitsy.
Tany Bretagne anefa, dia nifamory nanao fety antsokosoko ny olona 1000 mahery. Tonga avy hatrany ireo mpitandro filaminana 150, fa notsenain'ireto farany tamin'ny tora-bato, ka naratra ny zandary 3, maro ihany koa no efa mamo, ka mety hitarika faharatrana maro raha aparitaka.
Betsaka anefa ny tsy manao arovava sy fanajana elanelana ka ahiana arak'izany ny fifindran'ny aretina amin'ny fianakaviany.
Nisy ny fikasana hanapaka ny jiro, fa efa nivatsy groupe ireto tanora mandihy techno ireto.
vendredi, 01 janvier 2021 12:59
Ankazobe : Nodimandry ny depiote Dokotera Dera
Nodimandry io maraina io ny Solombavambahoaka voafidy tao Ankazobe Dokotera Dera, RALALASON Dera Harinjafy.
Voan'ny AVC izy tsy ela, ary io no nihombo ka nitarika ny fahafatesany na efa niala nenina notsaboina aza izy.